News - Site na Feb 5th rue 20, anyị ga-eme ememme mmiri n'oge a. Ndo maka ihe ọbụla na - emetụtaghị gị ma biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ị nwere mberede ị ga - enweta azịza. Ọ ga-amasị m iji ohere a chọọ ka gị na ezinụlọ gị niile nwee ihe kacha mma maka afọ ọhụrụ China nwere ọ andụ na ahụike!
Site na nke ise nke ise rue nke abuo, anyi g’eme ememme opupu ihe ubi n’oge a. Ndo maka ihe ọbụla na - emetụtaghị gị ma biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ị nwere mberede ị ga - enweta azịza. Ọ ga-amasị m iji ohere a chọọ ka gị na ezinụlọ gị niile nwee ihe kacha mma maka afọ ọhụrụ China nwere ọ andụ na ahụike!
Ememme 2020 Spring
Site na 5 FebNke ruo 20Nke , anyi ga eme ememme opupu ihe ubi n’oge a. Ndo maka ihe ọbụla na - emetụtaghị gị ma biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ị nwere mberede ị ga - enweta azịza. Ọ ga-amasị m iji ohere a chọọ ka gị na ezinụlọ gị niile nwee ihe kacha mma maka afọ ọhụrụ China nwere ọ andụ na ahụike!
Daalụ maka nlekọta na nkwado gị!
ỌH TR NEW ỌH NEWR NEW
Sintered diamond rawụta ibe n'ibe（teknụzụ ọhụrụ anyị）
CNC rawụta Bit tingcha Ngwaọrụ Diamond osise Bits N'ihi Stone marble Na Granite
Site na uru nke ịdị nkọ, nguzogide abrasion ka mma, njikọta siri ike na ọ dịghị mfe ịpịapụ, ọ bụ ezigbo ngwa ọrụ shank kacha mma, enwere ike iji egweri dị ka gburugburu ime, mechie, trenchi, arc, cone na elu ndị ọzọ pụrụ iche.
Esemokwu dị iche iche nke sintered, electroplated na brazed:
1) Ogologo oge ndụ
2) Nnukwu ahịa ahịa
3) Ojiji zuru oke: Dị maka ịcha microcline, tile, ihe, granite, marble na iko
1) Nnukwu nkenke
2) Nkọ dị mma karịa Brazed
3) Ọ dị maka ịkpụ marble na iko
4) Enweghị mgbawa
1) Teknụzụ ọhụụ, dị mma karịa ka ọ dị na mbụ
2) Ogologo ndụ karịa electroplated
3) arụmọrụ dị elu karịa sintered
4) Ọ dị mma na mkpụmkpụ akọrọ na ọnwụ mmiri
5) Odi maka igbutu marble na metal